Maqaallada ku saabsan Nigeria
Jaamacadaha ugu Fiican Nigeria
December 15, 2020 Maitri Jha Nigeria, waxbarasho
Nigeria waxay leedahay xarumo badan oo dowladeed iyo kuwa gaar loo leeyahay. Sida ku xusan warbixinta UNISA, Nigeria waxaa ka jira 162 jaamacadood. Khidmadaha sanadlaha ah ee jaamacadaha Dawladdu waa ku dhowaad $ 125- $ 500. Si kastaba ha noqotee, jaamacadaha gaarka loo leeyahay waxay ku kacaan celcelis ahaan $ 2,700 sanadkiiba. Nigeria
Nidaamka Codsiga Visa ee Nigeria
September 13, 2020 Antika Kumari Nigeria, fiisada
Nidaamka Visa ee Nigeria aad ayaa loo fududeeyay. Nidaamka codsashada fiisaha Nigeria ayaa hadda laga sameeyay khadka tooska ah. Waxaa jira waxyaabo gaar ah oo aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan dalban fiisada, maadaama ay jiraan dalal ay muwaadiniintoodu haystaan
Nidaamka Gaadiidka ee Nigeria !!
Waxaa laga yaabaa 17, 2020 Shubham Sharma soo qaado, Nigeria
Gaadiidka Nigeria waxay ka kooban tahay dhammaan afarta waddo. Inta badan dadku waxay ku tiirsan yihiin shabakadda wadooyinka ee gaadiidkooda. In kabadan 80% dadku waxay adeegsadaan gaadiid wadooyin kaliya si ay ugu safraan. Nigeria sidoo kale waxay leedahay shabakadda ugu weyn ee
Qiimaha Nolosha Nigeria
December 6, 2019 Shubham Sharma lacag, Nigeria
Makhaayadaha [Wax ka beddel] Cunnada Range, Makhaayada aan qaaliga ahayn 500.00 ₦ 362.30-1,000.00 Cunnada loogu talagalay 2 Qof, Makhaayadda Dhexe, Saddex-koorso 6,000.00 ₦ 3,500.00–12,000.00 McMeal oo ku taal McDonalds (ama Cuntada isku-dhafan ee u dhiganta) 1,600.00 ₦ 1,450.00-2,500.00 Beer Gudaha (0.5 Litir litir ah) 300.00 ₦ 250.00–500.00 Biyo la soo dhoofiyay (dhalada 0.33 litir)
Dukaammada Suuqyada ee Nigeria
December 6, 2019 Karuna Chandna Nigeria, wax in la sameeyo
Tinapa Dukaan Tinapa Dalxiis Tinapa waa suuq aad u weyn, oo wadarta guud ee tafaariiqda uu ka kooban yahay in ka badan 861,000 cagood oo laba jibaaran, taas oo ka dhigeysa suuqa ugu weyn ee Nigeria ee laga dukaameysto, iyo kan ugu weyn Afrika. Suuqa dukaamaysiga ayaa ku yaal
5 Hoteel oo ugu sareeya dalka Nigeria
December 6, 2019 Antika Kumari hotels, Nigeria
1. FEDERAL PALACE HOTEL LAGOS: Waxaa loogu magacdaray mid ka mid ah hudheelada ugu wanaagsan uguna da'da weyn shanta hudheellada ee magaalada Lagos, hudheelka 'Federal Palace Hotel' wuxuu siiyaa raaxada ugu fiican raaxada dadka ganacsiga socdaalka ah iyo martida madadaalada ah si isku mid ah. Iyadoo aan loo eegin da'da, hudheelka waa mid casri ah oo
WAQTIGII UGUGU DANBAN EE U SAMEE NIGERIA
December 6, 2019 Shubham Sharma Nigeria, safarka
Waqtiga ugufiican ee aado Nigeria waa inta lagu jiro xilliyada qalalan ee Noof-Jan. Tani waa wadan aad u weyn, si kastaba ha noqotee, jawigaaguna aad ayuu ugu kala duwan yahay jawiga iyo sidoo kale altitude; waqooyiga Sahel ee waqooyiga waxay aragtaa roob yar, oo bilaabmaya
Immisa ayaa safar ah oo Nigeria ku kici doona?
Sida safarka guuleysta, celceliska qiimaha 7-maalmood oo kali socdaal ah Nigeria wuxuu ku kacayaa $ 1,722. Si kastaba ha noqotee, safarka qoyska wuxuu ku kacayaa $ 954. Hoteellada ku yaalla dalka Nigeria waxay u dhexeeyaan $ 27 illaa $ 128 habeenkiiba. Laakiin, kirada fasaxyada guriga oo dhan,
Adeegyada Baananka ee ugu Fiican Nigeria
November 29, 2019 Shubham Sharma lacag, Nigeria
Bangiyada Nijeeriya waxay dib uga laabtaan adeegyadii maaliyadeed si ay uga faa'iideystaan ​​macaamiishooda iyo sidoo kale inay u soo jiitaan wax badan. Bangiyadaan ganacsi ayaa shati u leh inay shaqeeyaan Bangiga Dhexe ee Nigeria (CBN) kaliya kuma aysan haynin sumcad adag deegaan ahaan bangiyada.
Meelaha Dalxiis ee ugu Fiican ee lagu booqdo Nigeria !!
November 29, 2019 Shubham Sharma Nigeria, wax in la sameeyo
Nigeria waa mid ka mid ah waddamada adduunka ee lagu ammaano meelaha dalxiisyada gaarka loo leeyahay. Xaqiiqdii, dalxiisku waa mid ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dakhliga gudaha Nigeria. Waa ayaan-darro in dad badan oo reer Nigeriya ah ay ka maqnaadaan